Maqaallada Justin Gray on Martech Zone |
Maqaallada by Justin Gray
Justin Gray waa ganacsade taxane ah isla markaana ah agaasimaha guud iyo aasaasaha LeadMD, waa hay'adda ugu weyn ee howlaha dakhliga adduunka, iyadoo hirgelisay in ka badan kalabar saldhigga isticmaalaha Marketo. Justin wuxuu sameeyay xirfad shaqo oo ah furitaanka shirkado guuleysta isla markaana kor u qaadaya iyaga, iyada oo ka bixitaanadii guusha ee ka badnaa 200MM + tobankii sano ee la soo dhaafay. Justin dadaalkiisii ​​ugu dambeeyay wuxuu bilaabay 2016 markii uu aasaasay Lix leben, Bilaabid waxbarasho oo khadka tooska ah loogu talagalay in lagula dagaallamo shaqaalaha iyo macaamilka oo u maraya waxbarasho khibrad ku saleysan. 10-kii sano ee la soo dhaafay, Justin wuxuu u soo baxay cod xoogan oo ku saabsan ganacsiga, suuq geynta iyo dhaqanka. Isaga oo ah afhayeen la aqoonsan yahay, Justin waxaa lagu daabacay in ka badan 350 jeer daabacadaha warshadaha wuxuuna hayaa tiirarkiisa, Aqoonta Qabiilka, ee Inc., halka uu sidoo kale u qorayo Ganacsade, Tech Crunch iyo kuwa kale. Justin iyo xaaskiisa Jennifer waxay ku kulmeen suuq geyn iyo seddex sano ka dib ayaa wiilkooda, Grayson, ku soo dhoweeyay adduunka bishii Abriil ee 2017.